Kooxda Manchester United oo la soo wareegeysa Weeraryahan ka ciyaara horyaalka La Liga – Gool FM
Haaruun June 25, 2019
(Manchester) 25 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay indhaha ku hayso oo ay doonayso inay xagaagan u dhaqaaqdo weeraryahanka Sevilla ee Wissam Ben Yedder.
28-sano jirkaan kaasoo kooxda Sevilla kaga soo biiray naadiga Toulouse sanadkii 2016-kii ayaa dhaliyey 70 gool 138 kulan oo uu u ciyaaray kooxda reer Spain tartammada oo dhan.
Manchester United ayaa suuqa kala iibsiga xiddigaha ka soo qaadan karta weeraryahan cusub, maadaama la warinayo inuu ka tagayo Romelu Lukaku, kaasoo la filayo inuu ku biiri doono kooxda Inter Milan.
Shabakadda ciyaaraha ee France Football ayaa warinaya in Ben Yedder kaasoo heshiiskiisa uu ku joogo Estadio Ramon lagu burburin karo 36 milyan oo gini oo bartilmaameed sare u noqday kooxda Red Devils.
Ben Yedder ayaa sidoo kale la la xiriirinayaa kooxaha Paris Saint-Germain iyo Barcelona, waxaana uu dhaliyey 30 gool 54 kulan oo uu u saftay kooxdiisa haatan ee Sevilla intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii dhowaan dhammaaday ee 2018-19.
Xiddiga xulka qaranka Faransiiska ee Ben Yedder ayaa heshiiskiisa haatan ee uu ku joogo dalka Spain waxaa la filayaa inuu dhici doono labo sanadood kaddib.